PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: September 2014
တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတချို့ အပြောင်းအလဲလုပ်......
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေမှုကြမ်းကို ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင်ဆန္ဒ...
ဟောင်ကောင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကွန်မြုနစ်စနစ်ကို ဆန့် ကျင်ပြီး
ဒီမိုကရေစီကို ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေတဲ့ ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီအရေး တော်ပုံကို.... ဘေဂျင် မော်စီတုန်းကွန်မြုနစ် အာဏာပိုင်တွေ ဖိနှိပ်ရက်စက်နေတာ လက်ပိုက်မကြည်နေဖို့ ။ မိမိဟောင်ကောင်ကျောင်းသား တွေကို အကူညီပေးဖို့ တတ်နိူ်င်တဲ့ဖက်နေ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကို ပါဝင် ကူညီဖို့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေ ကို အရေးကြီး အကူအညီ တောင်းနေပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်အဖြူ နဲ့ အစ်ိမ်း
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအရ တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ အခု အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မလုပ်ရင် မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကို လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု
“မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောဘက်မှာ နှစ်ဘက်တပ်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကစထ မှူးနဲ့ ညှိနှိုင်ခဲ့တယ်။ အခြေအနေတွေ ထပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်အောင် နှစ်ဘက်တပ်တွေရဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်ထားဖို့တော့ လိုတယ်။ အခြေအနေက လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေ ဖြစ်မှာ
ဟောင်ကောင်မှာ လူထုရဲ့ အာဏာ ဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အခု စတင် လိုက်ပြီလို့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ လှုပ်ရှား မှုရဲ့ ခေါင်းဆောင် Benny Tai က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ အဆောက်အဦ ရှေ့မှာ စုဝေးနေကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လူတွေကို ဒီလို ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ လာမယ့် သီတင်းပတ်က စလို့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ စီးပွားရေး အချက်အချာ ကျတဲ့ နေရာတွေ ကို ပိတ်ဆို့ နေရာယူကြဖို့ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မကြီး အစိုးရက ဟောင်ကောင်ကို ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝ ပေးဖို့ ငြ⁠င်းဆန်တယ်လို့ ရှု့ မြင်ထားတဲ့ ဟောင်ကောင် ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြကြရာက အခုလို လှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ထွန်း လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနှစ်နာရီကြာ အခြေအတင် ဆွေနွေးကြပြီးတဲ့ နောက်မှာ ထောက်ခံ မဲ (၅၂၄) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၄၃) မဲ နဲ့ ဗြိတိသျှတပ် တွေ အီရတ်မှာရှိတဲ့ IS ပစ်မှတ်တွေကို လေကြောင်းက တိုက်စစ်ဆင်တာကို သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါတယ်။ ဒီ အဆုံးအဖြတ်ကို ဗြိတိန်ရဲ့ အဓိက ပါတီကြီးတွေ အားလုံးက အမတ်အများစုက သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗြိတိသျှတိုက်လေယာဉ်တွေ တနင်္ဂနွေ မနက်ပိုင်း လောက်က စပြီး စစ်ဆင်ရေးထဲ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရနိုင် တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 6:40 PM0comments
၂၂ ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄ KNU ရဲ့ ကရင်လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှ အမေးအဖြေများအပိုင်း (1)
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွင် အရေးပါသည့် တပ်နေရာ ချထားရေး၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများနှင့် အခြေခံ သဘောတူညီချက်များကို နောက်ချန်အနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပြီးမှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည် ဆိုသည့်အချက်ကို တိုင်း ရင်း သားများဘက်မှ သဘောမတူညီကြောင်း၊ အခြေခံ မခိုင်မာပါက လက်မှတ်ထိုးသွားမည် မဟုတ်ဟုလည်း နိုင်ဟံသာ က
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်တပ်များ ISIS အား အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းရေး
Post by Nava Noah.
ဤအခြေအနေကို ပြေလည်စေရန် စစ်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်း များအား ချော့တမျိုး၊ ခြောက်တဖုံဖြင့် တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စာချုပ်အား ဖိအားပေးလက်မှတ်ရေးထိုးစေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးရနေပါပြီဟု ကြေငြာရုံမှတပါး အခြားမရှိ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင် ရေးအတွက် လည်း စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ယင်းစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးစေလိုသည်မှာ အာသာငန်းငန်း ဖြစ်နေသည်။ ဘောလုံး သည် တိုင်း၇င်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများလက်ထဲသို့ ရောက်နေ ပါပြီ။ ဤသည်ကို ရှင်းလင်း
BBC က ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားတဲ့ ( T.N.L.A ) တအောင်းလွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး အကြောင်း
အမေရိကန်က တိုက်ခဲ့တဲ့ ပစ်မှတ်တွေထဲမှာ IS အဖွဲ့ ဌာနချုပ် ရှိရာ ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်းက ရက်ကာ မြို့လည်း ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် IS စစ်သွေးကြွ ဒါဇင်နဲ့ချီ
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်တပ်များ ISIS အား အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းရေး စတင်
SIS လို့ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ တည်ထောင်သူတွေက သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ ဥရောပတိုက်က မွတ်စလင်ဘာသာ မဟုတ်သူတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်က သူတို့အဖွဲ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေအပေါ် စစ်ခင်းကြောင်း အတိအလင်းပြောကြားတဲ့ အသံဖိုင်ထဲမှာ ISIS အဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Abu Muhammad al-Adnani ash-Shami က ပြောခဲ့တာပါ။
Posted by PNSjapan at 3:51 PM0comments
Posted by PNSjapan at 12:35 PM0comments
ဒီ ဆန္ဒပြပွဲဟာ တရားတဲ့ စည်းမျဉ်းကို ပြည်သူတွေက အာခံတဲ့ ပထမ ခြေလှမ်း အဖြစ် ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကလည်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကိုအခြေခံသည့် ပဋိပက္ခများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့၍ ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်များ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး ကာ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုများကင်းမဲ့ခဲ့ရသည်။ ယင်း အတွက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသော လူငယ်များ၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ နှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့
တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နားလည်မူမရှိရင် အပစ်ရပ်ရေး မသေချာဘူး ( နိုင်ဟံသာ )
တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေနားလည်မူမရှိရင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမသေချာဘူးလို့ အစိုးရနဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ဒီဗွီဘီကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) တို့ရဲ့ ၆ ကြိမ်မြောက် အပစ်ရပ် ဆွေးနွေးပွဲကို ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှာ စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် မျိုးဇော်လင်း၊ ထွန်းထွန်းသိန်းနဲ့ အောင်ကျော်ဇောတို့က ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ အန်စီစီတီခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
NCCT နှင့် အစိုးရတို့ ၏(၅)ရက်တိုင် ပြုလုပ်မည် အစည်းဝေးစတင်
အစိုးရနဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT ) တို့ရဲ့ ၆ ကြိမ်မြောက် ၅ ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်မယ့် တတိယမူကြမ်း အပစ်ရပ် ညှိနှိုင်းအ စည်းအဝေးပွဲ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။(DVB)
နေပြည်တော်ကောင်စီ ပျဉ်းမနားမြို့တွင် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်များကို လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဖြေရှင်းပေးရန် ABDDF တပ်ရင်း ၂၀၇ ရဲဘော်ဟောင်း ကိုဇော်မြင့်(ခ) ဇော်ကြီး က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်ချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လမ်းလျှောက်ကာ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြချိန် ၁၅ မိနစ် ဝန်းကျင်အတွင်း ပျဉ်းမနားမြို့မရဲစခန်းက တာဝန်ရှိသူများက ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်အတွက် ထိန်းသိမ်းသွားသည်။
အဆိုပါရဲစခန်းက မည်သည့်ပုဒ်မဖြင့် အရေးယူမည်ကို လက်တစ်လော ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကို ဗိုတောက်ခင်လမ်း Rain လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့မှ စတင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီး ရွှေချည်နှစ်လမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်စဉ် ထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် TNLA တပ်မတော်တိုက်ပွဲဖြစ်
၂၁ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှာ မန်စပ်-အွယ်လောရွာအနီးဖြစ်ပြီး ယနေ့ ညနေပိုင်း ၃း၁၅ မှ ၃း၃၀ အထိ ၁၅ မိနစ် ကျော်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ TNLA တပ်မတော်ဘက်တွင် ထိခိုက်မှု မရှိပါ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက် ထိခိုက်ကျဆုံး မှုမသိရသေးပါ။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
မြ၀တီမြို့ကပစ်ခတ်မှု DKBA ဗျူ ဟာမှူးဗိုလ်မှူးကြီးဆန်းအောင်ရဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုချက်
ဒီနေ့မနက် ၂ နာရီက မြဝတီမြို့ ကြံခင်းလမ်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပစ်ခတ်မှုမှာ ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း ၉၁၀ က ဗိုလ် တဦးသေဆုံးပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြဝတီမြို့ခံတဦး ပြောတာကတော့ "ဒီကေဘီအေဗိုလ်ဟာ အရက်မူးပြီး မြို့ထဲမှာ ကားသုံးစီး ကိုတိုက်ပြီး မောင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုမောင်းသွားရင်း လှည့်ကင်းထွက်တဲ့ စစ်တပ်၊ ဘီဂျီအက်ဖ်၊ ပြည်သူ့စစ် ပူးပေါင်း အဖွဲ့ရဲ့ ကားကိုတိုက်ပြီး ထွက်ပြေးမယ်လုပ်လို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှာ တဦးသေ၊ တဦးဒဏ်ရာ ရရှိပြီး မြဝတီဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီကေဘီအေ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်က အခုလိုတုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါ တယ်။
"ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင် ညကသေဆုံးရတဲ့ကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူတွေ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရမယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကမှားပေမဲ့ အဲလိုပစ်သတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ အခုဟာက အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အပစ်ခံရတာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအခြေအနေက အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ထိန်းချုပ်ဘို့ခက်နေတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကျနော်တို့လူကိုပစ်သတ်တဲ့လူကို ဒီကေဘီအေလက်ထဲအပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ဆိုးကျိုးတွေဘဲဆက်ဖြစ်လာမယ်။
"အရင်ကမြိုင်ကြီးငူမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကို ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ပစ်သတ်တဲ့အတွက် အဲဒီရဲဘော်ကို သူတို့ဆီကျနော်တို့လွှဲပေးလိုက်တယ်။ အခုကိစ္စမှာလည်း အဲဒီလူကို ဒီကေဘီအေဆီ လွှဲပေးရမှာဖြစ်တယ်။ "အခုဖြစ်တာက သူတို့ဘက်က ပစ်သတ်တာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့လူတွေ သူတို့ကိုလုံးဝမပစ်ဘူး။ အမှားရှိတဲ့လူကို ဒီလိုဘဲ ပစ်သတ်ရလား။ ဒီပစ်မိန့်ကို တပ်ရင်း (၂၇၅)က
ကျောင်းဝင်းများထဲသို့ လက်နက်များဖြင့် အဓမ္မ ၀င်ရောက်စီးနင်းခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ လက်နက်မရှိသော သံဃာတော်များကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းများကို မေ့မရသော်လည်း ပြုခဲ့သူများနှင့် အပြုခံရသူများ နောက်နောင်ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်မျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်နှင့်
ကြံခင်းလမ်းတွင် နေထိုင်သူတဦးက"ဖြစ်တာဟုတ်တယ် ဒီကေဘီအေနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြည်သူ့စစ် ပူးပေါင်းအဖွဲ့လို့ကြားတယ်"ဟုပြောသည်။မြ၀တီတွင် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ချိန်ကိုက်မိုင်းတွေ့ရှိပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားသည်ဟု ခရိုင်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတဦးက ယမန်နေ့က
မူလက ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူ ၏ မျက်နှာစာတွင် ဒေါင်လိုက်ထည့်သွင်းထားသော အကန့်လိုက် ဆစ်ပိုင်းပြီး မြှုပ်နှံထားသည့် လုံခြုံရေးကြိုးအစား အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုံခြုံရေးကြိုးအသစ်ကို အကန့်လိုက် အဆစ်ပိုင်းပြီး ပြောင်းလဲထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းလုံခြုံရေးကြိုးအသစ်သည် ယခင်လုံခြုံရေးကြိုးထက် အရွယ်အစား ပိုမိုကြီး၍ အရောင်လည်းပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ငွေစက္ကူ ကို ကြည့်သည့် အနေအထားပေါ်မူတည်၍ လုံခြုံရေးကြိုး၏ အရောင်သည် ရွှေဝါရောင်မှ အစိမ်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ငါးထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ၏ မျက်နှာစာဖက်၊ လက်ယာဘက်ပိုင်းတွင် ပုံစံအသစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆင်ဖြူ တော်ပုံ ရေစာပါရှိပြီး ငွေစက္ကူကို အလင်းရောင်တွင် ကြည့်ပါက ရေစာကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ငွေစက္ကူ ကို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားသည့် ဗားနစ် (Varnish) အလွှာသည် ပြင်ပမှ ရေခိုးရေငွေ့များ၊ အရည်များနှင့် အရောင်စွန်းထင်းနိုင်သည့် အရာများကြောင့် ငွေစက္ကူ ၏ အရည်အသွေး နိမ့်ကျ၍ ငွေစက္ကူ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်စေသဖြင့် ငွေစက္ကူ ၏ အသုံးပြုမှု သက်တမ်းကို ပိုမို
ညောင်လေးပင်နှင့် တောင်ငူ မြို့နယ်မှ လာရောက်နေထိုင် သူများရှိသည့် ဒုက္ခသည်စခန်း အနီးသို့ အစိုးရတပ်မှ ၀င် ရောက်လာခြင်းကြောင့် ထိတွေ့ မှု ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအ စည်းအရုံးမှ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး ဖဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။
‘‘သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာ ကို ကျော်ဝင်လာလို့ ဖြစ်တာပါ’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ ရုံးသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီအတွင်း အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
ထိုသို့ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကုန်ပိုင်းက တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေအတွင်း အစိုးရနှင့် ကေအင်န်ယူ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ သေးသည်။
Copy from - 7day
KNU/KNLA . PC ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီနဲ့ကလို့ထူးဘောကရင်အစည်းအရုံး KKO အဖွဲ့တွေကို မြ၀တီအခြေစိုက် ရှေ့တန်းအမှတ်(၂၇၅) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးကနေ ဒီလ ၁၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့တားမြစ်သတိပေးစာပေးပို့ခဲ့တာကို ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့က လက်မခံတဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အလားတူကြေညာချက်ကို မကြာမီထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်း ကလို့ထူးဘောကရင်အစည်းအရုံး KKO အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပက သတင်းဌာနတွေကို ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီက ဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ဂါးက ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့တာပါ။
သူက" ဒီကိစ္စကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် မီဒီယာကနေတဆင့် နိုင်ငံတကာက သိရှိနိုင်ဘို့အတွက် ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်"ဆိုပြီး ကရင်အမျိုးသား(မီဒီယာ)ကို ဒီနေ့မွန်းလွှဲပိုင်းမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေ မွှေးခဲ့တဲ့မီးကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်တွေရိုက်နှက်တာခံလိုက်ရတာကတော့ လစာ၊နစ်နာကြေး မရကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမလေးတွေပါ
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၃) ရှိ မာစတာစပေါ့စ် အားကစားဖိနပ်စက်ရုံတွင်စက်တင်ဘာ
၁၆ရက် ညပိုင်းက အလုပ်သမားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွား
မာစတာစပေါ့စက်ရုံ အလုပ်သမားများသည် ဇွန်လလစာနှင့်တရားမဝင်စက်ရုံပိတ်သိမ်း
ခဲ့သည့်အတွက် နစ်နာကြေးရရှိရန် ဇူလိုင်လ၁၇ ရက်နေ့က ကိုးရီးယားသံရုံးအရှေ့ထိ
အဆိုပါစက်ရုံပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုရီးယာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းစက်ရုံပစ္စည်းများ
ကို လေလံတင်ရောင်းချပြီး အလုပ်သမားများ ရစရာရှိသည့်နစ်နာကြေးများ ခွဲဝေပေး
မည်ဟု သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ကနဦး သတင်းများအရ စက်ရုံ
တွင်း ပစ္စည်းများကို လာယူသည့်တာဝန်ရှိသူများကို စက်ရုံအလုပ်သမားများက ပိတ်ဆို့
ထားရာမှတစ်ဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာကာ အပြန်အလှန် ရိုက်နှက်မှုများ ဖြစ်ပွား
ခဲ့ကြပြီးညဆယ်နာရီခန့်တွင် လူစုကွဲသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်များ၏ ရိုက်နက်မှုကြောင့် လစာ၊နစ်နာကြေးမရကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုး
အလုပ်သမလေး အများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်း- Aung Aung Kyaw.
(ဓါတ်ပုံ- မိုင်ဂျာယာန် အထက်တန်းကျောင်းပုံ၊ နှင့် ကောလိပ် အတွက် မြေနေရာတိုင်းတာနေစဉ်။)
(Lachid Kachin) KIO,ပညာရေး ဌာန မှ မိုင်ဂျာယာန် မြို့ တွင် ကိုယ်ပိုင် တက္ကသိုလ် ဖွင့်လစ်ရန်အတွက် အဆောက်အဦးများ စတင်ဆောက်လုပ် ပြင် ဆင်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကချင့် ပညာရေး ကော်မတီ မှ KIA, တပ်မဟာ (၃) ဒေသ ဖြစ်သော မိုင်ဂျာယာန် မြို့ တွင် ကချင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် မြေနေရာတိုင်းတာ ခြင်း နှင့် ကျောင်းအ ဆောက်အဦးပုံစံ ရေးဆွဲ ခြင်း များ စတင် ဆောင်ရွက် နေ ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိ တွင် မိုင်ဂျာယာန် မြို့ ၌ KIO, ပညာရေး ဌာနမှ ဦးစီးကာ ပရီ ကောလိပ် ကျောင်း ၊ဖယ်ဒရယ် ဥပဒေ ကျောင်း၊ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာ အထူးသင်တန်းကျောင်း ၊ဆရာဖြစ်သင် ကျောင်း နှင့် အခြား သောသင်တန်း ကျောင်းများ အား ဖွင့် လစ်သင်ကြား ပေးလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 9:45 AM0comments
IS အစ္စလာမ်မ္မစ် နိုင်ငံ အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ပူးပေါင်း ကူညီမယ်လို့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ က နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေက ကတိပြု လိုက်ပါတယ်။
IS အဖွဲ့ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ မဟာဗျူဟာ ချမှတ် နိုင်ရေးအတွက် ပြင်သစ် နိုင်ငံ ပဲရစ် မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံကို အဲဒီ ဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ညီလာခံ ကြေညာချက်ထဲမှာ သူတို့ အနေနဲ့ စစ်ရေး အကူအညီ အပါအဝင် အီရတ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဘယ်လို ကူညီမှုမျိုး မဆို အားလုံးကို ထောက်ပံ့ ပေးသွားမယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေ ကတိပြု ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလို ညီလာခံ တက်လာကြသူ အားလုံးက IS အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ သဘောတူကြတယ် ဆိုတာကို အားရ ကျေနပ် မိတယ်လို့ ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေ ဝန်ကြီး Laurent Fabius က ပြောပါတယ်။ IS အဖွဲ့ကို နောက်ဆုတ်သွားအောင် သာမက လုံးဝ ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ကိုလည်း အားလုံးက လိုလားတယ်လို့ သူက
အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွများက ဗြိတိသျှလူမျိုး တဦးကို ခေါင်းဖြတ်သတ်
ဗြိတိသျလူမျိုး အကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်း ဒေးဗစ် ဟိန်းစ်ကိ်ု ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပုံရတဲ့ ဗွီဒီယိုတခုကို အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် အမည်ခံ (အိုင်အက်စ်) စစ်သွေးကြွတွေက စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး ဗွီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမှုကွန်ယက် မီဒီယာတွေမှာတော့ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ အရင်ကလည်း အမေရိကန် သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျိမ်းဖော်လေနဲ့ စတီဗင် ဆော့လော့ဖ် တို့ကို ဒီလို ခေါင်းဖြတ်သတ်တာမျုိးကို အိုင်အက် သူပုန်တွေက ဖြန့်ဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခု ဗွီဒီိယိုမှာ ပါတဲ့ ဟိန်းစ်ကတော့ စကော့တလန်ပြည်နယ် ပါသ်မြို့က ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၄၄ နှစ်အ၇ွယ် ဖခင်ဖြစ်ပြီး ကလေးနှစ်ယောက် ရှိပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ မနှစ်က ပြင်သစ် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အက်တစ် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီအတွက် အလုပ်လုပ်နေရင်း အဖမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်တိုင်ဝါယာလျှော့ဖြစ်ပွားလျှင်ဖြစ်ပွားချင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသည့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနသို့ ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားပေးခဲ့ပြီး ယခုဖြစ်စဉ်အတွက် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနတွင် တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း
Posted by PNSjapan at 10:53 AM0comments
ပါမစ် ရှိနေစေကာမူ အလုပ်နှင့် ပါမစ် မတူသည့်သူ အားလုံး ယနေ့ဖမ်းဆီးခံရပြီး စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့် ကား ၃ စီးဖြင့် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည် ။ UN ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုပါ ယနေ့စစ်ဆေးရန် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီး ယခုထိုသူများ ဂျလန်းဒူတ လဝက ရုံးသို့ရောက်ရှိ ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း